စူပါကုန်ထုတ်စွမ်းအား - A လုပ်ရန်စာရင်းနှင့် Timestamp App | Linux မှ
အသုံးပြုသူများစွာသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရသာသို့မဟုတ်အလုပ်လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်စေကြိုက်နှစ်သက်လေ့ရှိသည် software tools များ ပြည့်ဝ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ, ခလုတ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအခြားသူများကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော၎င်းကိုပြောင်းလိုကြသည် ခြိုးခြံခြွေ, ရိုးရှင်းပြီးအချက်မှဖြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တစ်တွေတိုးလာတာပဲ ထွက်နိုင်ရေးနည်းပါးသောအာရုံပျံ့လွင့်စရာများရှိခြင်းအားဖြင့်။ ဒီလိုအာရုံအနှောင့်အယှက်တွေကများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ် ရုံးအလိုအလျောက် applications များ, များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသူအတွက်ကြီးမားတဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပမာဏပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်သို့မြန်မြန်ရောက်ရှိရန်ကူညီရန်ရုံးသို့မဟုတ်အခြားအပလီကေးရှင်းများကိုမကြာခဏဖန်တီးလေ့ရှိသည်။ အလုပ်ခွင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွက်လျှောက်လွှာ "စူပါကုန်ထုတ်စွမ်းအား"သို့မဟုတ် "Superproductivity"၎င်းသည်အသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သောကြောင့်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်ထင်ရှားသည် အလုပ်စာရင်း (လုပ်ရန်) y Time Tracker ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူပရိုဂရမ်မာများနှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်အလုပ်သမားများအတွက် Jira၊ Github နှင့် Gitlab ။
ငါလက်ျာဘက်အပေါ်ခုန်မီ "စူပါကုန်ထုတ်စွမ်းအား"ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားသော GNU / Linux လည်ပတ်မှုစနစ်များရှိကုန်ထုတ်စွမ်းအားကဏ္inတွင်အခြားအရာများအကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအက်ပ်များ သူတို့ကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့, ငါတို့အချို့ကိုအောက်တွင်ထားခဲ့၏ သက်ဆိုင်သောယခင်ပို့စ်များ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့အတူ၊ ဒီစာအုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါသင်စူးစမ်းလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ - \_ t
1 Super Productivity: App To-Do & Time Tracker
1.1 Super Productivity ဆိုတာဘာလဲ။
Super Productivity: App To-Do & Time Tracker
Super Productivity ဆိုတာဘာလဲ။
နှစ် ဦး စလုံးသည်သူ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် web ကို နှင့် GitHubအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"Personal To Do List, Time Tracking နှင့် Task Manager အက်ပလီကေးရှင်းများသည်ပရိုဂရမ်မာများနှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်အလုပ်သမားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Jira၊ Github နှင့် Gitlab ပလက်ဖောင်းများနှင့်လည်းပေါင်းစည်းထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် cross-platform (Linux, MacOS နှင့် Windows) ဖြစ်ပြီး၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအသုံးပြုသူများသည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအလုပ်များအတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်တိကျသောအလုပ်သို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုစုဆောင်းရန်နေရာတစ်ခုပေးခြင်းဖြစ်သည်။"
လှုပ်ရှားမှုများကိုစီစဉ်ရန်၊ ခြေရာခံရန်နှင့်အနှစ်ချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်ဖြေ - အချိန်ကုန်ခံပြီးအချိန်ဇယားများနှင့်အလုပ်အကျဉ်းချုပ်ကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များသို့အလွယ်တကူတင်ပို့နိုင်သည်။
၎င်းသည် Jira၊ GitHub နှင့် GitLab ပလက်ဖောင်းများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဖြေ - သူတို့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တင်သွင်းမှုကိုပံ့ပိုးပေးတယ်။ ထို့အပြင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဒေသအလိုက်စီစဉ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းမှတ်တမ်းများ (အလုပ်မှတ်တမ်းများ) ကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ရာပြောင်းလဲသွားပါကချက်ချင်းအကြောင်းကြားစာများလက်ခံရရှိခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်အသုံးဝင်သည်။
စီမံခန့်ခွဲထားသောစီမံကိန်းများ၏အချက်အလက်များစုစည်းခြင်းကိုကူညီသည်ဖြေ - မှတ်စုရေးတာ၊ ဖိုင်တွဲတာ၊ link တွေ၊ ဖိုင်တွေနဲ့ command တွေအတွက် bookmark တွေလုပ်ခြင်းအားဖြင့်။
ကျန်းမာသောအလုပ်အလေ့အထများတည်ထောင်ရန်ကူညီသည်ဖြေ - အနားယူချိန်ရောက်တဲ့အခါအသုံးပြုသူတွေကိုသတိပေးတဲ့ငြိမ်ငြိမ်မှတ်ဉာဏ်ကိုထည့်သွင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမက်ထရစ်များကိုလည်းသင်စုဆောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်မည်သည့်လုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ကိုအတည်ပြုရန်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
မှတ်ချက်ဖြေ - မင်းရဲ့တည်ဆောက်သူကသေချာတယ် "စူပါကုန်ထုတ်စွမ်းအား" ၎င်းသည်မည်သည့်ဒေတာကိုမျှမစုဆောင်းပါ၊ အသုံးပြုသူအကောင့်များသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် GNU / Linux အတွက်၎င်းတွင်လက်ရှိရှိသည် installer ကို ".deb" နှင့် ".AppImage" formats မှာထည့်သွင်းပါသင့်ရဲ့ ဒေါင်းလုပ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် လောလောဆယ်သူသည်မိမိအဘို့အသွားနေသည် တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအရေအတွက်က 6.3.3.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Super Productivity»၎င်းသည်အသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည် အလုပ်စာရင်း (လုပ်ရန်) y Time Tracker ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူပရိုဂရမ်မာများနှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်အလုပ်သမားများအတွက် Jira၊ Github နှင့် Gitlab; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » စူပါကုန်ထုတ်စွမ်းအား - စာရင်းလုပ်ရန်နှင့်အချိန်ခြေရာခံခြင်း App ကိုလုပ်ရန်
ဟေးကောင်တွေ၊ မင်းတို့ထဲကတချို့ဟာ Planner ကိုသုံးကြတယ်၊ လှပတဲ့ UI ရှိပြီး Todoist ကိုထောက်ပံ့တဲ့ Linux အတွက်ဇာတိ task manager ။
မင်္ဂလာပါ, Alain ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါကြည့်ပြီးပြီ, ငါတို့အနာဂတ်ထုတ်ဝေဘို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။